Vakuru - princetoncovid.org
Nharaunda Buddy Initiative - Vazvipiri vakagadzirira kubatsira vakuru vePrinceton. Mamwe mashoko pano. Kuti uratidzwe neNharaunda Nevakadzi Buddy uyo achakupa rubatsiro, ndapota kunyoresa pano.
Virtual Fireside Chat - Zoom misangano mukati mevhiki na2 pm Kudonha-mukati kuti utaure neshamwari nyowani kuburikidza nekombuta, smartphone kana landline. Bhalisa pano.
Mhuri yechiJuda & Yevana Sevhisi yeGreater Mercer County
Foni "yekudonha-maawa," M, W, F, 609-987-8100, ext 0; chaiyo rutsigiro mapoka anoumba, 609-987-8100, ext. 117 kana e; kurairwa kwega kwega, kugamuchira mishonga, mishonga, vanhu vasina inishuwarenzi uye inishuwarenzi yakazvimirira yakawanda (mubhadharo wemubhadharo wakabviswa panguva yedambudziko), 609-987-8100, ext 102. Kudonhedza-Maawa, Tsigiro Boka uye maSevhisi eVanhu anowanikwa muSpanish nemitauro miviri.
Gavhuna akapa mutemo mukuru unobvumidza vanachiremba vari pamudyandigere kana kubva kune dzimwe nyika kuti vapinde muhondo yekurwisa COVID-19. Iyo yekuraira inovapa kusadzivirirwa kwechibvumirano chenharaunda nekuda kwekutenda kwakanaka kuedza kwekupa COVID-19 kutarisirwa. Munhu mumwe nemumwe anogona kusaina pano. Hazvina kufukidzwa pasi pechirongwa, asi zvakare zvinodiwa vadzidzi mugore rekupedzisira rezvidzidzo zvekurapa.
Svet Mazhinji Masiki Purojekiti